Uma uphupha ukuthi uqabula uphathina wakho, kuyibhadi ngoba ubudlelwane benu buzophela maduzane. Uma kungumyeni noma unkosikazi wakho, kungenzeka bathandane nomunye umuntu. Uma nje kungumuntu omuhle, kuyinhlanhla futhi kusho ukuthi kukhona…
Uma uphupha ukuthi uyashada kuyibhadi ikakhulukazi kwabesilisa. Kusho ukuthi kuzoba nezikhathi ezinzima empilweni yakho maduzane. Uma omunye wabantu ephusheni lakho begula noma bekhubazekile kusho ukuthi uzoba nomshado ongenayo injabulo. Kuyinhlanhla…
Ukuphupha ugqoke umqhele, unikezwa umqhele, noma omunye oyilunga lomndeni wakho okanye umuntu othandana naye egqoke umqhele; lokho kuyinto engeyinhle. Imvamisa leli kuba iphupho elijwayelekile kubantu asebeshadile. Lisuke libika ukuthi kumalungiselelo…